Cookie Run အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
2.4.402 for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（882.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG
သင်၏အိပ်မက် cookie နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ပြီးအရိပ်ထဲတွင်ရှိနေဆဲဆိုးကျိုးများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ပြည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်မြေကိုပြန်လည်တောင်းခံပါ။ မီးဖိုထဲမှလတ်ဆတ်သောမီးဖိုနှင့်ကွတ်ကီးပြေးခြင်းမှထွက်လာသောမီးဖိုချောင်သည် cookie ပြေးပွဲကိုလာကြသည်။ မကောင်းသောအချိုပွဲ Monsters ကိုဆန့်ကျင်တိုက်လှန်နေစဉ်အတွင်းနူးညံ့သောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ပါ။
Guild တိုက်ပွဲများရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ အခြားမြေအစည်းအရုံးနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်အသစ်များကိုအနိုင်ယူပါ။ အတူတကွအဆင့်မြှင့်ရန်အစွမ်းထက်ရန်သူများဆန့်ကျင်ရန်တိုက်ပွဲများ။ Soul Store ကျောက်တုံးများ, Guild အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ, Guild Treasure များနှင့်အခြားအရာများရယူပါ။
Gingerbrave နှင့် coothifable cookie သူငယ်ချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးသူရဲကောင်း RPG ပုံပြင်! သင်၏အဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ပြီးအသစ်အဆန်းများနှင့်အချို့သောအကျွမ်းတ0င်သောမျက်နှာများနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အတိတ်ကအတိတ်ကိုအတိတ်ကအတိတ်ကအတိတ်ကအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ပြီးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုအနိုင်ယူပါ။ cookie နိုင်ငံတော်၏သူရဲကောင်းဖြစ်လာရန် Creative Kingder Kwg Gamer ကိုခံစားပါ။
ဒီဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်သူကသင့်ကိုကျယ်ပြန့်စွာပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်၏နိုင်ငံကိုထူးခြားသောအလှဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဆောက်အအုံများနှင့်ပြုပြင်ရန်စိန်ခေါ်သည်။ မြို့တော်အဆောက်အအုံသည်လွယ်ကူပြီးသင်၏နိုင်ငံအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းရုံနှင့်အထူးကိရိယာများသို့မဟုတ်အရသာဆိုင်ရာကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏နိုင်ငံကိုသင်၏ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းအရာကို cookie သူရဲကောင်း RPG တွင်ပါ0င်ပါ။
အသစ်သောတိုက်ပွဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် cookie စကြဝ universe ာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ပါ။ PVP RPG ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်။ Cookie ၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအသာပုတ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအာဏာကိုဖော်ဆောင်ပါ။
Build & Cookie နှင့် Ultimate Cookie ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
•စုံလင်ခြင်းနှင့်အလှဆင်နိုင်သည့်မြို့အဆောက်အအုံဂိမ်းတစ်ခုသည် cookie အင်ပါယာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောက်ပသော cookie အတွက်ဂန္ထဝင်ဖျော်ရည်ဘားတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
•ထူးခြားသောအလှဆင်ခြင်း, ပန်းခြံများ, သစ်သားဆိုင်များ, ဂျယ်လီပါတ်ဂိုနှင့်အခြားအရာများကိုတည်ဆောက်ထားသည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်သူ! •သင်၏နိုင်ငံတော်ကိုချဲ့ထွင်ရန်အဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်ရန်အဆောက်အအုံများမှအရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းထားသည့်စွန့်စားခန်းများ RPG နှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်သူ
အောင်ပွဲခံရန်သင်သွားသောလမ်းကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှာရိုက်နှက်ရန်အလွန်ချိုမြိန်လွန်းလှသည့်အကောင်းဆုံး cookie အသင်းကိုသင်စုဝေးနေသည့်တစ်ခုတည်းသောကစားသမား RPG ဂိမ်း! • Guild Battle System တွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပါ0င်ပါ။
• Cakes Mo Mo ကိုအနိုင်ရရန်အတွက်သင်၏အထူးကျွမ်းကျင်မှုများအပေါ် အခြေခံ. cookies များကိုရွေးချယ်သော congruating Simulator NSTERS
•သင်၏အသင်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုအနည်းငယ်ထိပုတ်ပါ။ သင်၏စစ်သည်များကိုအောင်ပွဲသို့ ဦး တည်သည့်နေရာတိုက်ခိုက်ရေးကာတွန်းများ။
cookie သူငယ်ချင်းများနှင့် Cookie Toppings များကိုစုဆောင်းပါ။ • Gatcha The Cookie အသစ်များကိုဖွင့်ရန်အကျွမ်းတဝင် cookie များနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ Cookie Cutters •သင်၏ cookies များအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးမြှင့်ရေးအတွက်နေ့စဉ်ရှာဖွေမှုများကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ပွဲတစ်ပွဲ
သင့် cookie ၏အထူးစွမ်းအားများကိုမြှင့်တင်ရန်ရှားပါးသော cookie toppings များကိုစုဆောင်းပါ။
•သင်ဟာဇာတ်လမ်း 200 ကျော်ကိုကစားနိုင်တဲ့စွန့်စားမှု RPG ပုံပြင်ပါ။ •မတူကွဲပြားသောဇာတ်လမ်းကိုလျှို့ဝှက်ထားပြီးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အတိတ်ကသူရဲကောင်းများ '' အတိတ်ကသူရဲကောင်းများ '' အတိတ်
"ဒီဂိမ်းလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်! သော့ဖွင့်ရန်, စွန့်စားမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်နေရာအသစ်များရှိသည်။ - PocketGamer.com
"Animations သည်အလွန်ကောင်းသည်။ အားလုံးတိုက်ခိုက်မှုမယုံနိုင်စရာကြည့်ရှုပါ။ အလွှာတွေအများကြီးရှိတယ် ... ဒါဟာတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာပဲ " - ရက်သတ္တပတ်၏မိုဘိုင်းဂိမ်း, PocketGamer.biz
"Cookie Run: မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် COSTEST COUCT BACK) ဖြစ်လိမ့်မည် --- Pocket Tripics" - [လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက် ဖြေ - ဒီခွင့်ပြုချက်ကဂိမ်းကိုဂိမ်းဒေတာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ • Read_external_storage
settings settings> Permissions> Permissions> Permissions> Permissions> Permissions Manager ကို> Set Massager
• iOS - OS - OS - OS - OS - OS 13 သို့မဟုတ်အထက်, RAM 2GB သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG : Game Review
Cookie Run: Kingdom Gameplay Walkthrough (Android/iOS) - Kingdom Builder & Battle RPG
PrO_RaZe Mobile Gameplays
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG Gameplay First Look
Cookie Run: Kingdom Gameplay Walkthrough Part 190 (Android/iOS) - Kingdom Builder & Battle RPG
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG - Gameplay Walkthrough Part 1 (iOS, Android)
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG 2.4.302
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG 2.3.202
Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG 2.3.102